06/10/2018 - Page 3 sur 4 -
Oniversite Ankatso : Hisy ny « Herinandron’ny tantara »
Homarihina ny 14 oktobra izao ny fetin’ny repoblika. Hampiantrano ny « Herinandron’ny tantara » ny oniversitén’Antananarivo, ny 10 ka hatramin’ny 16 oktobra ho avy izao. Hetsika karakarain’ny fikambanan’ireo mpianatra ao amin’ny sampana Tantara, na ny …Tohiny
Fanondranana « héroine » : Malagasy iray karohina
Fikasana hanondrana vovo-drongony mahery vaika any amin’ny Nosy Maorisy. Maorisiana iray mpiray petsapetsa amin’ny Malagasy amin’ny resaka fanaovana io asa ratsy io no voasambotra teny Ankadikely, ny alarobia lasa teo. Tsara marihina fa tovovavy malagasy …Tohiny
Fanamboarana kara-panondro : Hanjakan’ny kolikoly
Manodidina ny 5 000 Ariary hatramin’ny 15 000 Ariary ny risoriso amin’ny fanamboarana kara-panondrom-pirenena iray eny an-drenivohitra. Araka ny fanadihadiana natao tamin’ireo olona nanamboatra kara-panondrom-pirenena teny amin’ny distrika voalohany, eny Ambodinisotry dia vola be no …Tohiny